Semalt Expert dia manoritsoritra tolotra maimaim-poana ho an'ny tranonkala
Miaraka amin'ny fandrosoana momba ny siansa sy ny teknolojia, lehibe. Isanandro dia nampidirina teknika vaovao momba ny fanivanana angon-drakitra vaovao, mamorona fiantraikany goavana amin'ny orinasa sy fanangonana fampahalalana marina avy amin'ny tranonkala fototra sy ambony. Ny fampihenana ny data na ny fitrandrahana rakitra dia manampy hampitombo ny fahombiazan'ny fandraharahana. Azontsika atao ny maminavina mora foana ny fivoaran'ny tsena amin'ny alàlan'ny angon-drakitra voalamina sy voalamina tsara.
Inona ny SiteScraper?
SiteScraper dia fitaovana tsara fandinihan-jiro na fitaovana fitrandrahana natao ho an'ny mpividy nomerika, ireo manam-pahaizana momba ny media sosialy ary ireo orinasa tsara orina. Amin'ny alalan'ity fitaovana ity, azonao atao ny mahatakatra ny entana sy ny fitaovana izay takiana ary afaka mampitombo ny varotra ataonao. SiteScraper dia misy amin'ny dikan-teny maimaim-poana sy avo lenta. Ny freeware dia manana safidy voafetra maromaro, saingy ny drafitra voalohany dia hamoha ny endri-javatra samihafa izay mety tsy ho hitanao amin'ny tolotra hafa momba ny harena ankibon'ny tany hafa. Ny sasany amin'ireo endriny malaza izay mahatonga ny SiteScraper safidy tsara indrindra dia resahina etsy ambany.
1. Manampy ny mamantatra ireo lamina momba ny angon-drakitra
Tsy toy ny tolotra maimaim-poana na fanodinam-barotra hafa, ny SiteScraper dia mamaritra tsara ny lamin'ny rakitrao ary mahazo fampahalalana tsara avy amin'ny pejy samihafa. Ny iray amin'ireo tanjona fototra amin'ny fampandrosoana ny SiteScraper dia ny ahafahanao manakona ny angona avy amin'ny tranonkala tianao indrindra tsy misy fifandraisana satria ity fitaovana ity dia manatanteraka ny andraikitra ho azy ary tsy mitaky anao hanana fahaizana momba ny programa.
2. Izany dia mamerimberina ny lisitry ny sokajy maromaro
SiteScraper dia iray amin'ireo sombin-dahatsoratra vitsivitsy ireo ary ireo fitaovana fitrandrahana maimaim-poana izay manasokajy ireo sokajy sy lisitry ny toerana marobe. Midika izany fa azonao ampiasaina ity fitaovana ity ary hikapoka ny angon-drakitra takiana amin'ny alàlan'ny eBay sy Amazonia tahaka ny aterineto. Azonao atao ihany koa ny mikitika ny vavahadin-tserasera sy ny tranokalam-baovao miaraka amin'ny SiteScraper ary afaka mamorona lisitra sy sokajy ireo rakitra voarakitra tsy misy olana. Ny endri-javatra Scraping ao amin'ny sokajy dia mahasoa amin'ny famafana ny vaovao avy amin'ny vokatra amin'ny sokajy samihafa ao amin'ny fivarotana an-tserasera.
3. Mitadiava teny fanalahidy
Ny singa fandinihan 'ny fikarohana ao amin'ny SiteScraper dia mahatonga anao ho mora ny manatanteraka fikarohana sy mahita ny teny fanalahidy mety rehefa voasintona ny data. Midika izany fa hisy tahiry sy fehezanteny marobe izay ahafahana mametraka na mampifanaraka ny tranonkalanao amin'ny fomba tsara kokoa.
4. Kisendrasendra kisendrasendra
5. Tsy miasa amin'ny alalan'ny server proxy
Miaraka amin'ny SiteScraper, azonao atao ny manaparitaka ny angon-drakitrao raha tsy mamela izao tontolo izao hamantatra na hamantatra ny adiresy IP anao. Ity fitaovana ity dia afaka miasa tsy an-tsofina amin'ny alalan'ny proxy-ny servisy ary manafina ny adiresin'ny HIP, manome anao ny fiarovana sy ny tsiambaratelona manontolo raha toa ka voasintona ny data. Azonao atao ny misafidy amin'ny servieta isan-karazany mba hanafenana ny adiresy IP ary hiantohana ny fiarovana sy ny fiarovana an-tserasera Source .